Xhumana Nathi / Cela Ulwazi Oluthe xaxa - Hielscher Ultrasound Technology
Thintana nabakwaHielscher Ultrasonics ngocingo, nge-imeyili noma vakashela umphathi wethu omkhulu eTeltow, eJalimane. Uma unentshisekelo yokuthenga nokuprosesa okuphezulu kwe-lab yakho yocwaningo noma umkhiqizo wakho wezezimboni, i-Hielscher Ultrasonics izokunikeza uhlelo olufanele kakhulu lwe-ultrasonic lesicelo sakho. Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe bazokusiza ngenqubo yakho ye-ultrasonic, ukukusiza ngokuqeqeshwa kokusebenza kanye nensizakalo. I-Hielscher Ultrasonics inegumbi lokubonisa elungiselelwe ngokuphelele nesikhungo sezobuchwepheshe se-Ultrason kanye nelebhu yombukiso, ukuhlolwa okungenzeka nokwenza inqubo isebenze.
Amakheli & Imininingwane Yokuxhumana
Oderstr. 53, 14513 iTeltow, eJalimane
ifoni: +49 3328 437-420
I-Hielscher USA, Inc. – Ukuphatha / Ukubika
530 Ringwood Ave., Lembo&Grey Bldg., Wanaque, NJ 07465, eU.SA
ifoni: +1 (973) 532-6488 x101
I-Hielscher USA, Inc. – Ukucubungula i-oda / Indawo yokugcina impahla
136 Hulme Street, Mount Holly, NJ 08060, eU.SA
ifoni: +1 (973) 532-6488 x108
U-Hielscher uyayamukela imibuzo yakho, ubuza futhi impendulo. Uma ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nomunye umkhiqizo we-ultrasonic noma Inqubo kanye nayo yonke eminye imibuzo, sicela wenze noma usebenzisa ifomu elingezansi noma uxhumane nathi kunoma yikuphi Amakheli ngezansi. Sizoxhumana nawe maduzane.
I-UP50H (ama-50 watts)
I-UP100H (100 watts)
I-UP200Ht (ama-watts angu-200)
UP200S (ama-watts angu-200)
I-UP400S (ama-watts angu-400)
Ukuqeda ukushiswa kwama-Liquids
Ultrasonically Assisted Catalysis
Ukuhlolwa kwe-ASTM G32-92
Ifoni & Ukuhlanzwa kweC Cable
I-Petrochemistry (Amafutha & Igesi)
Ama-Nanomaterials & Nanotubes
I-Paint & ezinengilazi
Ifoni, Ikhebula neThubhu
Iphepha & Pulp
Ukubhoboza (ukuhlolwa kokuvuza)
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngohlu olubanzi lwe-homogenizer ephezulu yokusebenza ephezulu ye-lab, i-bench-top kanye nezicelo zezimboni. Ifakwe ngesikrini sokuthinta sedijithali, amakhadi e-SD ahlanganisiwe wokuqoshwa kwedatha ezenzakalelayo, ukulawulwa kwesiphequluli nokulawulwa okuqondile kwamapharamitha e-ultrasonic, ama-Hielscher ultrasonicators aqinisekisa ngamandla, ukwethenjwa, ukubambeka ngamandla nobungani bomsebenzisi. Izinhlelo zelebhu zihlanganisiwe, kulula ukuthutha futhi zilethe i-high-amandla ultrasound ekusebenzeni kwe-24/7. Zonke izinqubo zokusebenza kwe-ultrasonics ezimboni zingakhipha ama-amplopes aphezulu kakhulu. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Izinzuzo ezethusayo zobuchwepheshe bokulungiswa kwe-ultrasonic inqubo yokuqinisa, izindleko eziphansi zokucubungula, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukwelula uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe, ukuvumelana kalula nezicelo ezithile, ukuphepha kwendawo kanye nobungani be-opharetha, okwenza i-ultrasonication ibe yindlela yemiphumela ephezulu kakhulu nekhwalithi yomkhiqizo ethembekile.